U Thein Sein, Daw Suu and good Generals of Myanmar Tatmadaw must stop our beloved country from going to the dogs | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« For Thida
ဦးသာအေး “သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် သမ္မတ အိုဘားမားက ရိုဟင်ဂျာ အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ၂ ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြောကြားခဲ့သည်” »
ကျနော်ထင်တာတော့ သိန်းစိန်ကို နောက်ကျောဓါးနဲ့ ထိုးလိုက်တာလို့မြင်တယ်။ နာမည်တတ်ရရင်တော့ ရွှေမန်းပေါ့။ သိန်းစိန် ICG က ဆုရပြီးနောက်တနေ့ ဒီကိစ္စဖြစ်သွားတာ။
ဝါစဉ်အရ သိန်းစိန်က ဂျူနီယာ၊ ရွှေမန်းက ခင်ညွှန့် ရှေ့မှာတောင်နေရာပေးခံခဲ့ရတဲ့သူ တပ်မှာ သြဇာရှိတယ်။ ကြည်း၊ရေ၊လေ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှုး၊
သမ္မတဖြစ်မယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီး ထမင်းငတ်သွားတဲ့သူ၊
သိန်းစိန် သမ္မတဖြစ်လာပြိးကတည်းက လွှတ်တော်ကနေ တောက်လျောက် ပြဿနာလုပ်နေတာ
– လွတ်တော်ကော်မရှင်တွေကို ပြည်ထောင်စု အဆင့် မသတ်မှတ်တဲ့ ပြဿနာ၊
– အခုလဲ သိန်းစိန် လက်မှတ်မထိုးတဲ့ ဥပဒေ ၂ ခု ကို လွှတ်တော်ပါဝါနဲ့ အတည်ပြုလိုက်ပြီ
သိန်းစိန်က နိုင်ငံတကာမှာ မျက်နှာရနေတယ်။ ဆုတွေလဲ တဆုပြိးတဆုရတယ်။
ကြံဖွတ်ညီလာခံလုပ်တော့ သူက ဥက္ကဌရာထူးမှန်းတယ် ။ နောက်ဆုံး သိန်းစိန် ဥက္ကဌ ဆက်ဖြစ်တယ်။ အရင်က သူက ဒုက္ကဌ တယောက်ထဲ။ ညီလာခံမှာ နောက်ထပ် ဒု-ဥက္ကဌ ၂ ယောက်ထပ်ခံတယ်။ ဌေးဦးနဲ့ သူရအေးမြင့်၊
လွှတ်တော်မှာ ရခိုင်ကိစ္စကို ဝတ်ကျေတန်းကျေပဲဆွေးနွေးတယ်။ တဖက်မှာ သူခမည်းခမက် တော်တဲ့ ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေလို ခရိုနီတွေရဲ့ ငွေကြေးအင်အားရှိတယ်။ ယခင်တပ်ထဲမှာ တတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တော့ အခု စစ်တိုင်းမှူး ဖြစ်နေသူတွေမှာ သူသြဇာ ညောင်းသူတွေရှိနိုင်တယ်။ လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မလုပ်လိုတဲ့ ခေါင်းမာတဲ့ ဝန်ကြိးတချို့ကိုမွေးမယ်။ (ကျော်ဆန်းတို့ ပြုတ်သွားတဲ့ဇော်မင်းတို့လို) ၊
အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ နေရာမရတဲ့ ကြံဖွတ် ဗဟိုက အမှုဆောင်တချို့( အောင်သောင်း) တို့လို၊ အမျိုးသားေ၇းအစွန်းရောက် ဘုန်းကြိးတချို့ရယ်၊ ယခင်ထောက်လှမ်းရေး ပြုတ်ခင်ညွန့်အုပ်စု (ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေက သူရဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းမှာ ခင်ညွှန့်ကို ခန့်ထားပါတယ်။ ) ဒီလူတွေအင်အားကို ပေါင်းပြီး သိန်းစိန်ကို နိုင်ငံရေးအကျပ်တွေ့အောင်၊ နိုင်ငံတကာမှာ သိက္ခာကျအောင်၊ ပြည်တွင်းမှာ အထွေထွေအုံကြွမှုတွေဖြစ်ပြီး သိန်းစိန်ပြုတ်ကြသွားအောင် လုပ်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းလို့မြင်ပါတယ်။
တောင်ကုတ်မှာ လူ ၁၀ ယောက်သတ်ခံရတဲ့ ကိစ္စ သတင်းစာမှာ မွတ်စလင်မ် ကုလား လို့သုံးသွားတာ သိန်းစိန်အစိုးရမသိဘဲ ကျော်ဆန်းမွှေသွားတယ်ဆိုတာသိရတယ်။
အခု လက်ပတောင်းကိစ္စမှာ တဖက်မှာ ဆန္ဒပြတဲ့အုပ်စုတွေကို တဖက်လှည့်နဲ့ မြှောက်ပေး ၊ တဖက်မှာ သူလူတွေ ထည့်ပြိး သပိတ်ကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းပြ၊ ပြည်တွင်းမှာလဲ သိန်းစိန်ကို ဆဲ ၊ နိုင်ငံတကာမှာလဲ သိန်းစိန်ကိုဆဲ၊
သိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ အဲဒီလောက် အမိုက်ခံပြိး အင်အားသုံးမယ်လို့ တော့ မထင်မိဘူး။
ရခိုင်ကိစ္စရယ်၊ ပြည်တွင်းက မွတ်စလင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရယ်၊ အခု လက်ပတောင်းကိစ္စရယ် ရွှေမန်းဦးဆောင်တဲ့ အုပ်စုကြီးက ဖန်တီးကြိုးကိုင်နေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
Tags: Asia, Aung San Suu Kyi, Burma, Myanmar, Rakhine State, Tatmadaw, Thein Sein, United States
This entry was posted on November 30, 2012 at 1:02 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.